DISTRIKAN’I BEALANANA : Enjehina tsy ara-drariny ireo lazaina fa nanao fitsaram-bahoaka | NewsMada
Mitana ny sain’ny olona hatrany ny resaka fitsaram-bahoaka.
Niseholany ny tsy fandraisana andraikitr’ireo mpitondra mahefa tany amin’ny Kaominina Ankazotokana, distrikan’i Bealanana, mahakasika ireo mpangalatra lavanila tany an-toerana. Nandray andraikitra momba ny fananany ny fokonolona, saingy niafara tamin’ny fidobohana am-ponja ny raharaha…
Nosamborin’ny zandary avy any Antsohihy ny olona dimy avy amin’ny fokonolona ao anatin’ny Kaominina Ankazotokana, distrikan’i Bealanana, ny farany herinandro teo, noho ny filazana fa saika hanao fitsaram-bahoaka, ny farany volana aogositra 2016. Nanaovana sarika am-pandriana amin’izao fanenjehana tsy ara-drariny izao, ny ben’ny Tanànan’Ankazotokana teo aloha, ny sefo fokontany roa, sojabe iray ary mpampianatra amina CEG any an-toerana. Rehefa niakatra fampanoavana tany an-toerana moa ny raharaha, nidoboka am-ponja vonjimaika miandry ny fitsarana azy ilay ben’ny Tanàna teo aloha sy ilay sefo fokontany iray, raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa, ireo telo ambiny. Mbola nandefa zandary telo any amin’ny Kaominina Ankazotokana, ao anatin’ny distrikan’i Bealanana, ny avy amin’ny tobin’ny zandary ao Antsohihy ny fiandohan’ny herinandro teo, izay mampihorohoro ny fokonolona, fa maro no mbola hosamborina ao amin’ity Kaominina ity.
Tsy fandraisana andraikitra
Raha ny voalazan’ny loharanom-baovaonay any an-toerana, tsy fandraisana andraikitry ny zandary tao amin’ity Kaominina Ankazotokana ity, no niavian’izao olana izao. Raha tsiahivina ny tantara, kaominina efatra any amin’ny distrikan’i Bealanana no niroso amin’ny famokarana lavanila, anisan’izany ny ao amin’ny Kaominina Ankazotokana sy ny Kaominina Ambodiadabo. Nisy ny fananganana vovonana hisehatra amin’ity voly fanondrana ity tamin’ny herintaona, izay ahitana mpandraharaha. Nanapa-kevitra izy ireo fa ny volana septambra 2016 no fisokafan’ny tsenan’ny lavanila. Ny nampalahelo, misy mangalatra sy mioty eny am-potony ireo lavanila ary varotana an-tsokosoko, ny faramparan’ny volana jolay. Natao ny fanaraha-maso, ary ny sasany tamin’ireo mpangalatra nifanaraka amin’ireo sokajin’olona ao anatin’ilay vovonana mpisehatra momba ny lavanila. Nanapa-kevitra ny fokonolona fa hanatontosa andrimaso ary dia nisy iray sarona tamin’ity fangalarana fiotazana am-potony ny lavanila ity. Nentina teny amin’ny Kaominina Ankazotokana, avy eo nalefa tao amin’ny zandary. Votsotra anefa ilay mpangalatra ka nampiakatra ny hatezeram-bahoaka, izay nahatonga ny fitoraham-bato tao amin’ny Kaominina Ankazotokana, ny faramparan’ny volana aogositra 2016.
Nilaza tamin’ny fokonolona ny ben’ny Tanàna teo aloha, R. Joseph fa « mila mandray fanapahan-kevitra isika fa tokony hotazana ny lavanily satria ho tapitry ny mpangalatra eny ifotony ». Mitohy ny varotra an-tsokosoko ny lavanila, saingy tsy nandray andraikitra ny mpitandro filaminana. Voalazan’ny loharanom-baovao any an-toerana, fa misy tsikomban’ny lehiben’ny Faritra sy ny zandary ary ny sasany amin’ireo mpandraharaha ny tsy fisiana fandraisana andraikitra matotra eo amin’ireo mpangalatra, ka ny vahoaka indray no endrikendrehana ho manakorontana.
Nanome baiko ny avy ao amin’ny zandarimaria tany an-toerana hisambotra an’ity ben’ny Tanàna ity, ny faran’ny volana aogositra. Raikitra, noho izany, ny sakoroka niaraka tamin’ny tora-bato, tao amin’ny Kaominina Ankazotokana. Vokany, navotsotry zandary ihany izy avy eo. Tsy voafehy intsony ny nanombohana ny fisokafan’ny tsenan’ny lavanila tany an-toerana. Nofohazina tampoka izao raharaha izao, tamin’ny faran’ny volana janoary 2017 izao. Nilaza ho tsy faly ny fokonolona any amin’ny Kaominina Ankazotokana. Ankoatra ny fanagadrana, ireo olona roa ireo, nolazain’ny fokonolona any an-toerana fa mampihorohoro azy ireo, ny zandary telo nalefa any an-toerana. Ahina ny mety ho fiakaran’ny hatezeram-bahoaka any an-toerana.